Service providing during Covid-19 pandemic at Waing Maw – AHRN-Myanmar
Service providing during Covid-19 pandemic at Waing Maw
By AHRN IT — In Activities	— 21/05/2020
လက်ရှိအချိန်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာနှင့် အဝှမ်းတွင် ပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားလျက် ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် AHRN သည် လူနာများ နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင် များ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု စဉ်ဆက်မပြတ် ရရှိစေရန် အတွက် အန္တရာယ်ရှိသည့်ကြားမှ ကြိုးစား၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံများမှာ AHRN ဝိုင်းမော်ရုံးတွင် ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ကြိုးစားပြီး လူနာများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ပုံများဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် ကိုယ်ကျိုးမငှဲ့ပဲ လူနာများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည့် AHRN ဝိုင်းမော်အဖွဲ့သားများကို ဤပို့စ်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ AHRN-Waimaw project ကို Global Fund ရံပုံငွေအဖွဲ့နှင့် USAID HIV & AIDS Flagship Project (UHF) ရံပုံငွေအဖွဲ့တို့မှ ပံ့ပိုးကူညီ ပါသည်၊၊
Currently, the COVID-19 pandemic is affecting the world profoundly. During this trying time, AHRN is managing to continue its life-saving comprehensive harm reduction services for our clients, families and communities, despite the many infection control challenges.
The following pictures are from Waing Maw, where the AHRN the project team is showing innovative COVID-19 prevention efforts and at the same time, providing critical harm reduction services to those in need.
AHRN management salutes Waing Maw project for their selfless and professional commitment in serving our beneficiaries.
AHRN-Waimaw project is funded by Global Fund and USAID HIV & AIDS Flagship Project (UHF).